China Lipstick pasi labeling muchina Manufacture uye Fekitari |S-conning
S911 inoshanda zvakasiyana-siyana yekugadzira cosmetic mutsara kunyanya kune lick-stick uye lick balm labeling, uyu unomhanya unomhanya wekunyora muchina mubatsiri ane simba wekuvandudza kugadzirwa kukuru.
S911 Lipstick Pazasi High-Speed ​​Labeling Machine
S911 inoshanda zvakasiyana-siyana basa rekugadzira cosmetic mutsara kunyanya kune lick-stick uye lick balm labeling, uyu unomhanya-mhanya wekunyora muchina mubatsiri ane simba wekuvandudza kugadzirwa kukuru.
Muchina uyu wese unodzorwa nekombuta, otomatiki kuona mabhodhoro evimbiso uye label synchronously, uye michina zvakare inogona kuve yakashongedzerwa nemuchina wekudhinda unopisa.
·Kutora yakakwirira-kumhanya servo injini system.
-Inoshanda kumhando dzakasiyana dzekatoni yekuisa label stick.
- Yakagadzikana kumhanya: 0-250 pcs / miniti;
-Yakakwirira-chaiyo yekunyora sisitimu, ine kushivirira kwemavara ± 1mm;
-Akangwara kudzora sisitimu yekuona kuti hapana makwinya kana uchinyora uye hapana mabhuru emhepo emapepa akajeka;
-Otomatiki-Kururamisa mashandiro echinopindirana cheni kuti ive nechokwadi chakagadzikana kutamiswa kwezvinhu uye chaiyo chinzvimbo;
-Iyo yakazara labeler inotora SUS304 simbi isina tsvina uye A6061
yakakwirira-simba aluminium alloy, ine chitarisiko chakanaka uye kutevedzera zvinodiwa zve cGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS uye CE.
S911 zvakare iLipstick Production Line Main inokodzera mushonga, makemikari emazuva ese, chigadzirwa chekuchengetedza munhu, indasitiri yechikafu, cosmetic etc cylindrical chigaba kana diki chigaba chakatenderera chepamusoro chakatenderedza kunyora, auto-otomatiki bhodhoro bhodhoro Labeling Machine ine date printer.
Midziyo yakatenderedzwa (senge mabhodhoro eraundi, lipstick, zvirongo, uye makapu) inoiswa yakachinjika pama rollers uye mushandisi anobatidzwa neruoko.Rollers anoshandura bhodhoro sezvo label yakanyatsoiswa pabhodhoro.Muchina unoshandiswa nemagetsi nephoto-electrical label detector yekunyatsojeka.Muchina unokwanisa kuenderana nehukuru hwakasiyana hwema label uye denderedzwa midziyo.Muchina unogona kugadzirwa nepedal switch uye zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Zvakapfuura: High-speed otomatiki katoni kugadzira uye yekupinza yekugadzira mutsara
Zvinotevera: S921 High speed soft tube labeler
Printer For Cosmetics Jars Bottles, Sticker Labeling Machine Manufacture, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Syringe Assembly uye Labeling System, Plastiki Chisimbiso Machine, Commercial Bottle Labeling Machine,